Dilkii Guddoomiye Cabdixakiin oo la ogaaday inuu ahaa dil qorsheysan | KEYDMEDIA ONLINE
Dilkii Guddoomiye Cabdixakiin oo la ogaaday inuu ahaa dil qorsheysan
Waxaa la xaqiijiyay dilkii AUN Guddoomiyihii degmada Hodan Marxuum Cabdixakiin Dhagajuun inuu ahaa mid qorsheysnaa oo ay fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xeer Ilaalinta guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa xaqiijiyay in dilkii guddoomiyihii hore ee Degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun uu ahaa mid si ku talagal ah u dhacay.
Xeer Ilaaliyaha oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa qiray in dilkii loo geystay Cabdixakiin Dhaga-juun uu ahaa mid qorsheysan ayna ku ogaadeen baaritaanka ay sameeyeen guddigii loo xil saaray kiiskaas ee baaritaanka ku hayay dhacdada lagu dilay guddoomiye Dhagajuun.
Waxaa uu sheegay Xeer Ilaaliyaha inay bilaabi doonaan dhawaan dhageysiga dacwad maxkamadeedka loo haysto dadkii ka dambeeyay dilka, iyadoo shalay lagu wareejiyay maxkamadda warbixintii ay soo diyaariyeen guddigii loo xil saaray dhacdadii Dhagajuun lagu khaarajiyay. Xeer ilaaliye Buulle ayaa sidoo kale sheegay in shaaca laga qaadi doono magacyada dadka loo heysto kiiska, isla markaana sharciga la marsiin doono, lana mudeyn doono Maxkamadda.
Kiiskan ayaa loo xiray mas'uuliyiin ay kamid yihiin taliyayaasha saldhigyada Booliska Howlwadaag iyo Waaberi, inkastoo damiin lagu sii daayay taliyaha saldhigga degmada Waaberi, balse waxaa xiran askartii ku sugneed goobta lagu dilay marxuumka oo uu ugu horreeyo taliyaha Saldhigga Booliska degmada Howlwadaag oo ah qofka looga shakisan yahay inuu dilka geystay.
Odayaal iyo wax garad kasoo jeeda qoyska uu ka dhashay Marxuum Dhagajuun ayaa warbaahinta u sheegay in kiiska marxuum Dhagajuun ay dowladdu gacan bidixeyneyso, waxayna dalbadeen inuu helo Marxuumka Caddaaladda.